အချိုခြောက် - ဝီကီပီးဒီးယား
အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျာဗားရှိ လက်ဖက်စိုက်ခင်း
အချိုခြောက် (သို့) အချိုခြောက်ရည် (အင်္ဂလိပ်: black tea) သည် လက်ဖက်ရည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်၍ အူးလုံလက်ဖက်ရည်၊ လက်ဖက်အဝါရည်၊ လက်ဖက်အဖြူရည်၊ လက်ဖက်စိမ်းရည်တို့ထက် အောက်စီဂျင်နှင့် ပို၍ဓာတ်ပြုထားသည့် အဖျော်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ (နို့လက်ဖက်ရည် (milk tea) နှင့် ရောထွေးမှုမရှိရန်) အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လက်ဖက်မည်းရည် (black tea) ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ဤလက်ဖက်ရည်အမျိုးအစားသည် အခြားသော အမျိုးအစားများထက်ပို၍ အရသာပြင်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်၌ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းအမျိုးအစား ငါးမျိုးစလုံးကို လက်ဖက်ပင် (Camellia sinensis; common name- tea plant) မှရသော အရွက်များဖြင့် ပြုလုပ်ကြ၏ ။ အဓိက မျိုးစိတ်နှစ်ခုကို အသုံးပြုကြရာ၌ တရုတ်လက်ဖက်ရွက်သေး (C. sinensis var. sinensis) ကို အခြားသော ရေနွေးကြမ်းများပြုလုပ်ရန် အသုံးပြုသည်များပြီး အာသံလက်ဖက်ပင် (C. sinensis var. assamica) ကို ဤရေနွေးကြမ်းပုံစံအတွက် အစဉ်အဆက် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အာသံလက်ဖက်ရွက်ဖြင့်ပင် လက်ဖက်စိမ်းရည်၊ လက်ဖက်ဖြူရည်များကိုလည်း မကြာမီက ပြုလုပ်ခဲ့ကြလေသည်။ ဤအချိုခြောက်(ရည်)သည် တရုတ်ပြည်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကာ ကောင်းမွန်သော လက်ဖက်ရွက်အခြောက်ခံနည်းစနစ်ရှိပါက ဓာတ်တိုးအရောင် အနီရောင်ကို မူတည်ပြီး တရုတ်စကားဖြင့် ရေနွေးနီ (紅茶) ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။
လက်ဖက်စိမ်း၏ အနံ့၊ အရသာသည် တစ်နှစ်သာခံသော်လည်း လက်ဖက်မည်းသည် နှစ်အချို့အထိ အနံ့အရသာ မပျက်တတ်ပေ။ ဤအတွက်ကြောင့်ပင် ဤလက်ဖက်အမျိုးအစားသည် ရောင်းဝယ်ကုန်အဖြစ် နှစ်ကာလရှည်စွာ တည်ရှိခဲ့ပေ၏ ။ မွန်ဂိုလီးယား၊ တိဘက်၊ ဆိုက်ဘေးရီးယား တို့၌ ၁၉ ရာစုခန့်က ဤလက်ဖက်မည်းကို 'ဖိသိပ်အတုံးပုံစံဖြင့်' လက်တွေ့ပြင်ပတွင် ငွေကြေးပုံစံတစ်ခုအနေဖြင့် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Heiss၊ Mary Lou; Heiss၊ Robert (2011)။ The Story of Tea: A Cultural History and Drinking Guide။ Potter။ ISBN 978-1607741725။
↑ Bressett, Ken. "Tea Money of China". International Primitive Money Society Newsletter (44, August 2001).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အချိုခြောက်&oldid=670168" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၇:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။